UltraBook-kii ugu horreeyay ee Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, iyo in ka badan!) Waa la iibiyay | Laga soo bilaabo Linux
Laga soo bilaabo wax badan iyo wax yar Tom's Hardware warkan ayaa i soo gaadhaya.
ZaReason ayaa iibisay UltraBook (waad ogtahay, laptop-yadaas suuuuuper khafiifa) in isbeddel ahaan, waxay u keeni doontaa Linux distro asal ahaan 😀… Waxaan ku tusayaa xulashooyinka:
Sidaad arki karto, waxaa kale oo jira ikhtiyaar aad ku iibsan karto LA'AAN nidaamka qalliinka.
Wuxuu la yimaadaa processor Core i3-3217U ee 1.8ghz ($ 49 dheeraad ah waxaa loogu beddelaa a Core i5-3317U at 1.7ghz Turbo 2.6ghz), oo leh 4GB oo DDR3 RAM ah (waa la ballaarin karaa ilaa 16GB), 32GB kaydinta SSD (waa la ballaarin karaa ilaa 256GB SSD), iyo waliba haddii loo baahdo waxaa ku jiri kara HDDs, marka lagu daro haysashada Intel HD 4000 oo loogu talagalay sawirada. Sida iska cad waxaa ka mid ah Wifi iyo Bluetooth, WebCam, kaarka akhristaha, iwm.
Waxaad ku arki kartaa dhammaan qeexitaannada farsamo xiriiriyehan: ZaReason UltraLap 430
Faahfaahin kale oo aan shakhsi ahaan u arko weyn waa suurtagalnimada in furaha super (oo loo yaqaan 'Win key' ee kumbuyuutarka) leeyihiin Astaanta Ubuntu, o un Tux.
Tani Ultrabook wuxuu leeyahay qiimaha ugu yar ee 899 $, Iyadoo hal sano oo dammaanad ah Haa, maahan sida ugu raqiisan, laakiin waa wax.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » UltraBook-kii ugu horreeyay ee Linux la iibiyaa (Ubuntu, Debian, Fedora, iyo in ka badan!)
Wanaagsan! Post Qoraal aad u wanaagsan. Mahadsanid!
Qiimuhu maaha wax guriga lagu qoro, waxaad ka heli kartaa qalab lamid ah iyo / ama qalab ka fiican qiimo jaban ... laakiin waxaan u maleynayay inay xiiso laheyd in lala wadaago macluumaadka
Wanaagsan, hubaal heer sare ah, waxaan layaabay horumarka aan Linuxers iyo dhamaan bulshada GNU / Linux sameyneyno.
Maalin walba Linux badan ayaa sii kordheysa!
Waxaan rabaa furahaas Tux! 😀
Oh aad u fiican 😉 Waa horumar.
qiimahaas waxaan ku iibsanayaa ciidan badda ah oo caado u leh waxqabadka saddex-geesoodka ah, iyo xitaa ku filan si aan u beddelo furaha farxadda leh ee Tux xD
soo jeedintu way fiicantahay laakiin uma qalanto
Waxaan kaliya u iibsan lahaa inaanan laheyn astaanta daaqadaha kumbuyuutarka.
Had iyo jeer waan rinjiyeyn karnaa furahayaga muraayadaha madow iyo tipex sawirkeena tux: D.
Waxa aan wali i xidhin waa qiimaha, kuwa $ 899 waa doolar ayaan filayaa?
Waxaan jeclaan lahaa inaan u soo iibiyo sababta fudud ee ah inaan Tux u keeno SuperKey haha
Hagaag, badbaadi lacagtayda, waa wax aad u jaban in la noqdo ultrabook waxaanan qiyaasayaa inay tahay sababta oo ah waxay ku timaaddaa Linux sidaas darteedna 2000/3000/4000 MXN $ lama siinayo isla 🙂
U $ S 1 = $ 4,62 (Argentines) => U $ S 899 = $ 3829,74 (Argentines)
Si kastaba ha noqotee, badeecadahan waa la soo dejiyey oo wax la soo dejiyey ayaa noo xaddidan, marka ma garanayo goorta ay imaan karaan haddii mid la amro, oo xitaa haysta lacag iyo mid la dalbanayo, waxaa suurtagal ah in dowladda la jecel yahay ee Argentina aysan oggolaan doonin anaga si aan ugu badalno doolar ama xitaa aan u iibsano PC-gaas oo aan nafteena ugu xadidno iibsashada Bangoh, BGH togan, bunni kent iyo waxyaabo kale oo madax xanuun badan oo xalka ah.
______ Waa nalakala baxay ¬¬ '
Markaa dadku waxay ka cabanayaan qiimaha Apple.
Laptop-kani waa khayaano dhab ah.
Ma arko ultrabook-ka, laakiin waxa ugu fiican ayaa ah inay ku rakibaan shirkad Linux ah oo haddii ay wax weyn tahay, waxaan rajaynayaa in shirkado badan oo kumbuyuutar sameeyaa ay ku sameeyaan si ballaadhan, doortaan haddii aan doonayo daaqado ama Linux.
Si daacadnimo ah waxaa jira laptops aad u wanaagsan iyo noocyo aad u awood badan, ka saarista daaqadaha wax kharash ah kuma fadhiyo ..., tusaale ahaan haddii aan horeyba u qarashgareyno ku dhowaad 900 oo euro, waxaan aadayaa Asus Zenbook.
Hagaag, waxyar inyar ayey soosaarayaashu bilaabayaan inay xoogaa madaxooda adeegsadaan kana fikiraan isticmaaleyaasha GNU / Linux.
Waxaan u maleeyay in haysashada Free OS ay ka jaban tahay, waxaa jira waxyaabo kale oo ka wanaagsan kana raqiisan Windows… Runtii ma fahmin inay war wanaagsan tahay iyo inay tahay war xun
Waa wax fiican "ultrabook" waxaanan ku dhejiyay xigashooyin sababtoo ah waxay si dirqi ah u buuxinaysaa tilmaamaha ultrabook. Waa inay iibiyaan teebabka aan xitaa lahayn astaanta Windows oo ay ku taalo astaamihii shirkadda sameysay.
Astaantu waa inay noqotaa S for Superman :-P.
O .waxaa s for qaali ah
Ku jawaab rubens
Lufer 157 dijo
900 doollar? !!!
Hagaag, ereyo malahan ¬¬
Keydinta Kirismaska, laakiin haddii qof doonayo inuu i siiyo kahor intaanan diidin 🙂
Waxaan qabaa oo dhahaa isla saaxiibkaa 😀
ama s qaali qaali ah
Caddadka Koowaad ee GIMP Magazine Waa La Heli Karaa